Adamant: Free decentralized amaghị ozi ngwa na ndị ọzọ | Site na Linux
Taa, anyị ga-aga n'ihu na otu ngwa ọzọ nke ozi ngwa ngwa obere amata na ngalaba Linux, akpọrọ "Adamant".
N'ụzọ bụ isi, "Adamant" Ọ bụ ngwa ozi ngwa emeghe emeghe nke dabere na teknụzụ blockchain (ngọngọ), nke n'aka nke ya, na-eje ozi dị ka Obere akpa (Obere akpa) y Sistemụ Exchange Cryptocurrency (Exchange).
"Adamant" ọ bụ nke anọ anyị ngwa ozi ngwa kesaa, nke bukwara otutu ma gbasaa ya na teknụzụ blockcheni, ebe obu na, na post gara aga, nke anyi na agba gi ka iguta mgbe emechara akwukwo a, anyi dere banyere Juggernaut, Sphinx na Ọnọdụ. Nke anyị na-akọwa nkenke ndị a:
"Juggernaut, Sphinx na Ọnọdụ abụghị naanị uru dị mma dị ka ngwa izipu ozi, kamakwa dị ka usoro ma ọ bụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, ebe ọ bụ na ha dabere na teknụzụ blockchain." Juggernaut, Sphinx na Ọnọdụ: Mmasị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
1 Adamant: Ighapu ozi ezighi ezi
1.1 Gịnị bụ Adamant?
1.2 Njirimara na arụmọrụ
1.2.1 Enweghị aha na Nzuzo
1.2.2 Mgbasa na Blockchain
1.2.3 Obere akpa ego
1.2.4 Sistemụ Exchange Cryptocurrency
Adamant: Ighapu ozi ezighi ezi
Gịnị bụ Adamant?
Na nkenke, gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, na-akọwa ngwa dị ka ndị a:
"Ọ bụ ngwa ezipụ ozi na-ezighi ezi".
Kaosinadị, dị ka anyị kọwara na mbido mbipụta ahụ, ọ bụ a ngwa ozi ngwa de oghe emeghe dabere na teknụzụ blockchain (ngọngọ) nke n'aka nke ya, na-eje ozi dị ka obere akpa Crypto (Obere akpa) na Cryptocurrency Exchange System (Mgbanwe). Na njirimara ndị a na ndị ọzọ, anyị ga-aga n'ihu n'okpuru.
Njirimara na arụmọrụ
Enweghị aha na Nzuzo
Ndị ọrụ adịghị mkpa ịdebanye aha ma ọ bụ tinye ozi ọ bụla. Ọ naghị eji ozi ịntanetị ma ọ bụ nọmba ekwentị. Ma data ngwaọrụ onye ọrụ (dịka akwụkwọ adreesị ma ọ bụ ọnọdụ). Ọzọkwa, ọ naghị enye data adreesị IP na ndị ọrụ ndị ọzọ. Usoro nzuzo na usoro ezoro ezo eji mee ihe dị elu. Usoro izi ozi nwere ike iji Tor Network maka enweghị aha.
Mgbasa na Blockchain
Ozi ya na-ezighi ezi na-anọghị na gọọmentị, ụlọ ọrụ na ndị mmepe, ya mere, ọ nweghị onye nwere ike ijikwa, gbochie, gbanyụọ, machibido ma ọ bụ nyocha ndekọ. Ezochiri ozi niile site na Diffie-Hellman Curve25519, Salsa20, Poly1305 algorithms ma banye SHA-256 + Ed25519 EdDSA. Igodo nkeonwe anaghị ahapụ ngwaọrụ eji. Na usoro nke ozi na eziokwu ha na-ekwe nkwa site na usoro mmejuputa ngọngọ.
Obere akpa ego
Ọ na-enye ndị ọrụ mfe iji obere akpa ego Crypto, iji kwado nnweta ụwa nke ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ na-akwado cryptocurrencies ndị a: Bitcoin, Ethereum, Lisk, Dogecoin, Dash na Stably Dollar. Niile site na iji nke passphrase maka ohere ịnweta ihe niile, na-enye onye ọrụ njikwa njikwa nke igodo onwe ha. Ọ na-enye ohere ma na-eme ka ndị ọrụ nwee ike ịnata ma kwụọ ụgwọ ozugbo ha na ndị ha na-akparịta ụka, ma ọ bụ jiri Bots nwere ike ịmekọrịta arụmọrụ.
Sistemụ Exchange Cryptocurrency
Ọ na-enye usoro kesara nke mgbanwe na-enweghị aha, nke na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịzụta / ree (ahia) akụ dijitalụ, echekwara ma bufee ya na mbụ, na-eji nkata.
Ọ na-eji ikikere GPLv3, nke na-enye ohere iji nyochaa koodu isi mmalite, gụnyere ọnụ Blockchain, usoro nkwukọrịta na ngwa izipu onye ahịa.
Maka nbudata na Linux, ị nwere ike ime pịa njikọ ndị a dị na ebe nrụọrụ weebụ ya, maka nbudata onye nrụnye na «Formatdị AppImage», Nke mbipute nke ugbu a (2.7.0), na maka ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịga na gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub. O nwekwara installers maka Windows, MacOS, Android, iOS na Tor, gbakwunye onye ntanetị weebụ.
Ozugbo Ngwugwu AppImage, Ọ nwere ike itinye ya site na eserese eserese, na-enye ya ikike ikike site na njikwa faili ejiri ma na-eme ngwugwu ahụ site na oke ahụ. Mgbe emechara ya, anyị nwere ike tinye site na ịmepụta na ịtinye a passphrase site na windo mbụ. Maka nkọwa ndị ọzọ na ebe a ị nwere ike pịa ihe ndị a njikọ.
Ozugbo ngwa ahụ batara, a na-egosipụta ihe ndị a echiche na nkọwa:
Dị ka a pụrụ ịhụ, "Adamant" ọ bụ ihe na-akpali ezigbo ozi ngwa ngwa nke ụdị PWA (Ngwa Web na-aga n'ihu / Ngwa Weebụ Na-aga n'ihu) bara uru ịgbalị ịmatakwu ụwa Defi.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Adamant», ihe na-adọrọ mmasị ma amachaghị ngwa ngwa izi ozi ngwa emeghe emeghe nke dabere na teknụzụ blockchain (ngọngọ) nke n'aka nke, na-eje ozi dị ka Obere akpa y Sistemụ Exchange Cryptocurrency; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Adamant: Gbasara ngwa ngwa izipu ozi na-ezighi ezi na ihe ndi ozo